वूकोमर्स ईमेल मार्केटि forका लागि उत्तम उपकरणहरू Martech Zone
वूकोमर्स सबैभन्दा लोकप्रिय र यथोचित एक उत्तम ईकामर्स प्लगइन WordPress को लागि हो। यो एक निःशुल्क प्लगइन हो कि सेटअप गर्न र प्रयोग गर्न सरल र सीधा छ। निस्सन्देह तपाईको पाल्ने सबै भन्दा राम्रो तरीका WordPress पूर्ण कार्यात्मक ई-वाणिज्य स्टोरमा वेबसाइट!
जहाँसम्म, ग्राहकहरू प्राप्त गर्न र कायम राख्न, तपाईंलाई बलियो ईकामर्स स्टोर भन्दा बढी आवश्यक पर्दछ। तपाईलाई कडा चाहिन्छ ईमेल मार्केटिंग रणनीति ग्राहकलाई कायम राख्न र उनीहरूलाई दोहोर्याउने खरीददारहरूमा परिवर्तन गर्नको लागि। तर ईमेल मार्केटिंग भनेको के हो?
ईमेल मार्केटिंगले ईमेल मार्फत उपभोक्ताहरूसम्म पुग्नको कार्यलाई जनाउँछ। ईमेलसँग अझै पनि कुनै पनि मार्केटिंग च्यानलको सर्वश्रेष्ठ आरओआई छ। वास्तबमा, प्रत्यक्ष मार्केटिंग संघ रिपोर्ट गर्दछ कि ईमेल मार्केटिंग आरओआई dollar every every प्रत्येक डलरको लागि खर्च हुन्छ, यसले ड्राइविंग बिक्रीको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मार्केटि। च्यानल बनाउँछ।
इ-कॉमर्समा ईमेल मार्केटिंग प्रयोग गरीन्छ:
तपाईंको ग्राहकहरु सर्वेक्षण गर्नुहोस्
ग्राहकहरूको पालनपोषण गर्नुहोस् जो खरीद गर्न अझ तयार छैन
खरीद गर्न को लागी तयार भएका ग्राहकहरुलाई बेच्नुहोस्।
अन्य व्यक्तिको उत्पादनहरू प्रचार गर्नुहोस् (उदाहरणको लागि एफिलियट मार्केटिंग)
नयाँ पोष्ट / ब्लगमा ट्राफिक ड्राइभ गर्नुहोस्
वूकोमर्स किन शीर्ष ईकामर्स प्लेटफार्म हो:
वूकोमर्स केहि बेच्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
वूकोमर्स सित्तैंमा छ
एक भरपर्दो र सुरक्षित प्लेटफर्म
छनौट गर्न प्लगइनका विविधता
छिटो र सेट अप गर्न सजिलो
तपाईंलाई उत्तम ईमेल मार्केटि strategy रणनीति सिर्जना गर्न मद्दतको लागि, हामी शीर्ष email ईमेल मार्केटि tools उपकरणहरू साझेदारी गर्न जाँदैछौं; तपाईंले आफ्नो ईमेल मार्केटिंग जाँदै गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भए सुरू गरौं!
Woocommerce ईमेल मार्केटिंग को लागी Best उत्तम उपकरण
यो तपाईको साइटलाई मेलचिममा जडान गर्नको लागि एक उपकरण हो, एक सबैभन्दा लोकप्रिय ईमेल मार्केटिंग सेवाहरू उपलब्ध छन्। यस उपकरणले तपाईंलाई फारमहरू निर्माण गर्न, एनालिटिक्स अवलोकन गर्न र अझ धेरै सक्षम गर्दछ। मेलचिम्पले ई-वाणिज्य रिटेलरहरूलाई ड्राइव बिक्री मद्दत गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको ग्राहक समक्रमण गर्न र डेटा स्वचालित गर्न कार्यहरू स्वचालित गर्न र लक्षित अभियानहरू पठाउन मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो भाग? यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ! मुख्य विशेषताहरु:
अनुकूलन साइन-अप फारमहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको WordPress साइटमा थप्नुहोस्
फारम बिल्डर र ई-कमर्स प्लगइनको एक विस्तृत विविधता संग एकीकृत गर्नुहोस्
तपाईंको अभियानहरूको बारेमा विस्तृत रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्
नयाँ ग्राहकहरु साइन अप हुँदा स्वचालित सूचनाहरु पठाउनुहोस्
मेल चिम्पको लागि साइन अप गर्नुहोस्
Jilt एक सबै मा एक WooCommerce पसल को आवश्यकता को लागी बनाईएको मार्केटिंग प्लेटफर्म हो। यस प्लेटफर्मको मद्दतले तपाई न्यूजलेटरहरू, बिक्री घोषणाहरू, स्वचालित अनुगमन ईमेलहरू, रसिदहरू, सूचनाहरू, र अधिक पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं डिजाईन क्वालिटीमा बलिदान नगरी सबै स्वचालन, विभाजन, र लेनदेन ईमेलमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। मुख्य सुविधाहरू समावेश:
एक WooCommerce एकीकरण छ।
बिक्री घोषणा पठाउनुहोस्
ईमेलहरूमा क्रस-बेच्ने र अपसेलहरू थप्नुहोस्।
उन्नत विभाजन इञ्जिन प्रयोग गरेर विगतका खरीदहरूमा आधारित क्षेत्र
परित्यक्त कार्ट ईमेलहरूको साथ राजस्व पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्।
प्रत्येक ईमेलको लागि विस्तृत प्रदर्शन मेट्रिक्स
ड्र्याग-एण्ड-ड्रप मोड्युलहरूको साथ एक आश्चर्यजनक ईमेल डिजाइनर
तपाइँको जेल्ट ट्रायल शुरू गर्नुहोस्
Follow. अनुसरण गर्नुहोस्
फलो-अप्स एक यस्तो उपकरण हो जुन तपाईको ग्राहकलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ प्रयोगकर्ता रुचिमा आधारित जटिल ड्रिप अभियानहरू सिर्जना गरेर, र खरीद ईतिहासमा स and्केत गर्न बिक्री र उच्च सment्लग्नता, सबै मार्केटिंग च्यानलहरूमा कम प्रयासका साथ। मुख्य विशेषताहरु समावेश:
अभियानहरूमा फलो-अपहरू बढाउनुहोस्
ट्र्याक ग्राहक मान
तपाइँ सम्भाव्यहरु लाई ट्वीट पठाउनुहोस्
विस्तृत एनालिटिक्स- (खुला / क्लिक / प्रेषित / आदि)
मेलिंग सूची बनाउनुहोस् र प्रबन्ध गर्नुहोस्
नि: शुल्क र कस्टम टेम्प्लेटहरू
गुगल एनालिटिक्स एकीकरण
अनुस्मारकहरू सिर्जना गर्नुहोस्
फलो-अप प्लगइन डाउनलोड गर्नुहोस्
ओम्निसेन्ड स्वचालित र म्यानुअल ईकामर्स ईमेल डिजाइन गर्नका लागि उत्तम उपकरण हो। यो ई-कॉमर्स व्यवसायलाई सहि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सन्देशहरू सही व्यक्तिमा पठाई सही मार्फत सही च्यानल प्रयोग गरेर उनीहरूको मार्केटिंगलाई सान्दर्भिक बनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राख्दछ। ड्र्याग एण्ड ड्रप सुविधाले तपाइँको उत्पादनहरू समक्रमण गर्दछ र तपाइँलाई तपाइँको न्यूजलेटरहरू र स्वचालन अभियानमा उत्पादन जानकारी राख्न अनुमति दिन्छ। प्रमुख सुविधाहरू समावेश:
यो WooCommerce एकीकरण छ।
एकीकृत SMS, वेब पुश सूचनाहरू, फेसबुक मेसेन्जर, र अधिक धेरै तपाईंको मार्केटिंग मिक्समा
सही सन्देश सही ग्राहकमा जाँदै छ, प्रत्येक पटक स्वचालन प्रयोग गरेर पठाउनुहोस्।
तपाईंको मापदण्डमा आधारित लचिलो खण्डहरू सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो WordPress डाटाबेसबाट सम्पर्कहरू सिंक गर्न सक्नुहुनेछ।
सजीलै अवतरण पृष्ठ र पपअपहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
विभिन्न च्यानलहरू मार्फत बिक्री प्रदर्शन ट्र्याक गर्नुहोस्
तपाइँको ओम्निसेन्ड परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
मेलप्याट दुबै निःशुल्क र प्रीमियम संस्करणको साथ एक अत्यधिक स्केलेबल उपकरण हो। यो एक अग्रणी वर्डप्रेस ईमेल मार्केटिंग प्लेटफर्म हो जसले तपाईंलाई तपाईंको वर्डप्रेस ड्यासबोर्डबाट सबै चीज गर्न दिन्छ। MailPoet सुन्दर ईमेलहरू पठाउन दाबी गर्दछ जुन प्रत्येक पटक इनबक्सहरूमा पुग्छ र वफादार ग्राहकहरू सिर्जना गर्दछ। प्लेटफर्म व्यस्त साइट मालिकहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ, तिनीहरूलाई मिनेटमा सुरू गर्न मद्दत गर्दै। मुख्य सुविधाहरू समावेश:
MailPoet सँग एक सीधा WordPress प्लगइन छ।
तपाईं सदस्यता फारम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र यसलाई इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं आफ्नो साइटमा मन पराउनुहुन्छ।
या त स्क्र्याचबाट वा बिभिन्न प्रकारका टेम्प्लेटहरू प्रयोग गरेर ईमेलहरू बनाउनुहोस्
बिभिन्न ग्राहक सूचिहरु सेट अप गर्नुहोस्, र तिनीहरु लाई WordPress मा प्रबन्ध गर्नुहोस्
स्वचालित साइनअप सूचनाहरू र स्वागत ईमेलहरू पठाउनुहोस्।
MailPoet को लागी साइन अप गर्नुहोस्
सहि ईमेल मार्केटिंग उपकरणहरू र प्लगइनहरूको साथ, तपाईं सजिलैसँग ईमेल मार्केटिंगको सबै पक्षहरू सजिलैसँग सदस्यता फाराम निर्माण, ईमेल निर्माण, सूची प्रबन्धन, एनालिटिक्स ट्र्याकिंग, र अधिक - तपाईंको WordPress वेबसाइटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। स्वचालित ईमेलहरू सिर्जना गर्ने र प्रबन्ध गर्ने काम कहिले सजिलो भएको छैन, माथि उल्लेखित उपकरणहरूलाई धन्यवाद। उपकरणहरू जाँच गर्नुहोस्, उनीहरूका सुविधाहरू र मूल्य निर्धारण योजनाहरू हेर्नुहोस् तपाईंको लागि सही उपकरण चयन गर्नु अघि।
यो विश्वासनीय एजेन्सीहरू जस्तै WordPress विशेषज्ञहरूको टोली राख्नु सिफारिस गरिएको छ अपलरहरू जो अनलाइन व्यवसाय को जटिलता बुझ्न सक्दछ। तिनीहरूले मद्दत गर्न सक्दछ तपाईंको कस्टम ईकॉमर्स स्टोर बनाउनका साथै तपाईंलाई सबै आवश्यक ईमेल मार्केटि plug प्लगइनहरू एकीकृत गर्न।
प्रकटीकरण: हामी यस लेखमा सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्दैछौं।
टैग: प्रत्यक्ष मार्केटिंग संघइकमर्सecommerce ईमेलईकॉमर्स प्लेटफार्मईमेल एकीकरणइमेल मार्केटिङईमेल रोईफलो-अपजेल्ट ईमेलmailchimpMailPoetसर्वव्यापीwoocommerce
कसरी र किन कर्पोरेट गुगल खाताको लागि वितरण ईमेल ठेगाना दर्ता गर्न